कोरोना कहर र मजदुर रोएको मजदुर दिवस
विद्यार्थीलाई कोरोना खोप र निषेधाज्ञा अवधीको कोठा भाडा मिनाहा गर्ने अनेरास्ववियुको माग
जसपा संसदीय दलको नेतामा महतो चयन,ठाकुरले पठाए पत्र
बरिष्ठ नेता नेपाललाई भेट्न बादल पुगे कोटेश्वर
गैँडाकोटका पाँच वटा वडामा ७० प्रतिशत सक्रिय संक्रमित
ए हिसाब !
सम्झनामा चेतन कार्की
निःशब्द , आर्यघाटमा जे देखियो !
मे १ तारिख अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टका कारण १३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस यस वर्ष नेपालसहित विश्वका धेरै देशमा प्रभावित बनेको छ, कुनै औपचारीक कार्यक्रम हुने छैन्न । गत बर्षको श्रमिक दिवसमा पनि कोरोनाकै कारण औपचारिक कार्यक्रमहरु भएन्न। नेपालमा यो वर्ष ‘कोरोना महामारीबाट बचौँ, बचाऔँ, मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लागू गरौँ’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ ।
कोरोना कहर संगै मजदुर काम बिहीन भएका छन । उनीहरुको गाँस खोसिएको छ । बासको टुङगो छैन । मजदुरहरु अहिले अलपत्र अवस्थामा छन । ब्यानर बोकेर नारा लगाउनु अहिले कल्पना बाहिरको कुरा भएको छ । रोजीरोटी गुमेको छ । कोरोना संक्रमणको त्रास झनै थपिएको छ । कामका लागि दुरदराजबाट शहर भित्रिएका उनीहरु पुन शहरबाट गाउँको बाटो तय गर्न बिवश छन ।
मजदुरको काम रोकिएपछि हातमुख जोर्न ठूलै युद्धको सामना गर्नपर्ने परिस्थीति श्रृजना भएको छ अहिले । अहिले सबै भन्दा बढी चेपुवामा परेको तल्लो तहका निमुखा नागरिक नै हुन । मध्यम वर्गलाई यसको कुनैं प्रवाह छैन । किनभने त्यो तप्काले केहि भए पनि आउने दिनका लागि सञ्चय गर्न सक्ने हैसियत राख्छ । महंगीको भार हरेक बर्ष बढ्दो छ । कमाएको पैसाले दैनिकी चलाउन नपुग्ने हुँदा बचतको उनीले कल्पना गर्नसक्ने अवस्था छैन । कोरोनाको प्रभाव चुलिँदै जाने हो भने गरिबी झनै बढ्न सक्ने बिज्ञहरुले बताउँदैआएका छन । श्रममा जोतीने श्रमिकका लागी नेपालको श्रम बजार फेरी धरासायी बन्ने ठूलो खतरा देखिइसकेको छ ।
बिश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा श्रमको मुल्य अत्यन्त न्युन छ । कतिपय श्रमिकले श्रम ऐनले तोकेको पारिश्रमिक पनि पाउँदैनन् । मजदुर र मालिकबिच भएको सम्झौता व्यवहारिक रुपमा कार्यन्यवन हुँदैन । जो स्वदेशमा बस्न चाहन्छन र आफ्नो कार्य क्षमता अनुशार काम गर्ने चाहन्छन उनीहरुको अबस्था अब झनै भयाबह बन्न सक्ने खतरा छ । सम्भावित जोखिम आउन नदिनका लागि सरकारले नेपाल मै कच्चापर्दाथ उपलब्ध हुने उद्योगहरुको उत्पादन बढाउन सक्दो छिटो आवश्यक पहल गर्नुपर्ने हो तर सरकारले यस तर्फ खासै चासो दिएको देखिदैन ।
यस्ता जोखिमहरु पर्दा देशका कार्यकारी प्रमुखले सशक्त कदम चाल्नु पर्ने हो तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । कोरोना संक्रमण परिक्षणको दायरालाई सरकारले व्यापक बनाउने सँगसँगै अन्य प्रयाप्त कामहरु यतिबेला गर्नु पर्ने थियो । भावी निती निमार्णका प्रसस्तै योजनाहरु तय गर्न सकिन्थ्यो तर सरकार बिवादित छ पदको दुरुपयोग मै रुमलिएको छ । अहिले सर्बत्र बिरोधको सामना गरिरहनु परेको छ । जनतालाई संकट परेको समयमा पनि सरकारकाले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु अर्को दुखद पक्ष हाम्रा सामु छ ।
यसको असर ठूलो हुन सक्छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरुले र्दुत गतिमा काम गरेर अर्थतन्त्रलाई बलीयो बनाउने बाटोमा लाग्न सक्लान तर नेपाल जस्तो देशमा योजना तयार भए पनि काममा ढिला सुस्ती र आर्थिक चलखेल धेरै हुने हुँदा यसको असर पछिसम्म पर्न देखिन्छ । कार्यकर्ताको झुण्डलाई मात्र होइन आम युवाहरुलाई अबसर दिइयोस। नतिजामुखी बनाउन पहल चाल्न अब ढिला भइसक्यो ।
युवाहरुलाई कृषि प्रविधी, मल वीउ र कृषिमा अनुदान दिएर भएपनि रोजगार सिर्जना गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो। उद्यम गर्न चाहने युवाहरुलाई थोरै लगानीका साना व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्ने किसीमले कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने युवाहरुले लाभ लिन सक्छन । ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने महत्वपुर्ण समयका रुपमा सरकारले यसलाई बुझनु पर्छ । यसो गर्दा कृषिजन्य उद्योगहरुमा दिगोपन हुन्छ र यसले कृषिलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउन पनि सहज हुन्छ । यसरी अगाडी बढ्दा गरिवी विवारणमा पनि सहयोग पुग्छ । गरिवीको रेखामुनी भएको वर्गलाई माथी उठाउन पनि टेवा पुग्छ ।
अबका केहि महिना सरकारले बिशेष राहत हुने प्याकेजहरु ल्याउन आवश्यक छ यस तर्फ बिज्ञहरुले पनि सुझाव दिइरहेका छन तर सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेको छैन । कोरोनाको अर्को प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । अबको एक डेढवर्ष पर्यटक आउने सम्भावना रहँदैन । बैदेशिक लगानी पनि तत्कालका लागी आउने सम्भावना छैन । उद्योग व्यवसायीको समस्या पनि बिकराल छ त्यसतर्फ पनि सरकारले तत्काल कदम चाल्न जरुरी छ । राहतका लागि व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने ब्याजको समय सीमा बढाउने, घरभाडा छुटका लागि घरधनीसँग आग्रह गर्ने लगायतका केही घोषणा सरकारले गरेको छ तर यो घोषणामा मात्रै सिमति हुनु भन्दा पनि नतिजामुखी बनोस ।